Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa in todobaadyada soo socda ay mar kale joojiso Qaadka Kenya – Xeernews24
December 29 (XeerNews24)
Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay in dowladda ay ka fikireyso go’aan ay ka qaadato Qaadka laga keeno Kenya, hadii dowladda Kenya wax cudur daar ka bixin sababaha ay u fulin weydo heshiiska.
“Dowladda Soomaaliya waxay ka fikireysa labada todobaad ee soo socda inay mar kale hakiso Qaadka laga keeno Kenya, hadii dowladda Kenya wax cudur daar ah ama warbixin cad ka keenin sababaha ay dhankeeda uga fulin weyday heshiiskii September”ayuu yidhi Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo diiday in la xigto magaciisa.
Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa ku eedeeyay dowladda Kenya in aanay fulin heshiiskii horay ay u wada gaadheen, taasoo ku qasbeysa Soomaaliya inay go’aan deg deg ah ka gaadho Qaadka laga soo dhoofiyo Kenya oo dhaqaale fara badan ay ka helaan Ganacsatada Qaadka ee Kenya.
Heshiiskii bishii September ee ay gaadheen Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhigayay in Kenya ay joojiso Diyaaradaha rakaabka ee lagu baaro garoonka Wajeer, taasoo dhib badan ku qabaan muwaadiniinta Soomaaliya iyo in la fududeeyo dal ku galka Kenya oo isna dhib badan ku qabaan adka Soomaaliyeed ee doonaya inay tagaan Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda fulisay heshiiska maalin kaddib heshiiskii ay wada gaadheen labada Madaxweyne, iyadoo dib u bilowday diyaaradihii Qaadka laga keenayay ee mudada KMG xayirnaa.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii magaalada Nairobi ku kulmeen Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Mohamed iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenyna Amina Maxamed, iyagoo ka wada hadlay xidhiidhka labada dal iyo dhaqan gelinta heshiisyadii horay loo gaadhay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/images-1-1.jpg 181 278 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-29 15:42:382016-12-29 15:42:38Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa in todobaadyada soo socda ay mar kale joojiso Qaadka Kenya
Daawo Faalo laga baxshay Booqashadi madaxweyne Geele kutagey dalka Masar